ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: "ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဒီမိုကရေစီအလေ့အထ (ပေးစာ)"
သူကမဆက်တာလား ကိုပေါက မဆက်တာလား။
ခုတလော ဘယ် blog သွားသွား အဆက် ဆိုတာချည်းပဲ။
ကျွန်မ တစ်ယောက်ရေးရင် လုံလောက်ပါပြီ
well Paw, frankly speaking, i like his letter.. its good, deep and sharp..
well Paw, as he says, we can only creata'democracy system' according to 'democractic principles' that we have.
so we'll have 'burmese democracy'. how effective and how good 'burmese democracy' all depends on the people.
democracy won't build people character. people will build democracy character.
အသံတွေ ဘယ်လိုထွက်လာအုံးမလဲ စောင့်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်
အားလုံးလို့တော့မဆိုပါဘူး သဘောပေါက်ချင်ချင်ဖြစ်နေသူများ အတွက် သဘောတရားခိုင်မာသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
that's really good. wait n see how many people understand of democracy n how they react.
ကျွန်တော် ခံတွင်းတွေ့သွားတာလေးတွေ ကတော့ ...
ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေကို သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်းအလိုက် ဝေဖန်ကြတယ် ......................
သတိချပ်စရာ တခုပဲရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အရေးအသားဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းကို ရောက်ရဲ့လား .................
လူတိုင်းကို ဘယ်စနစ်ကမှ ယဉ်ကျေးအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားကသာ လုပ်နိုင်တယ် ..............
Don't beawrong side of the history! Dictatorship will fall eventually. Doalittle bit of something against them every time you haveachance. Don't work for them. Tell people around you to fight back. We must fight for our freedom, our future.
First we need to get rid of the Army government for the best of the country. Under the military ruler, the country will get nowhere like people are sinking in the quick sand. With them you can only hope for the worst. It has proven almost 50 years already. We need to bring them down with our own hands. It's time again to startacountry wide revolution like 88. Look out what happen in Iran right now. We can do it, be unite, be prepare.
I'matrue believer that only the people revolution can change this government.
အခုလို ပြည်တွင်းက စာဖတ်ပရိတ်သတ် တယောက်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို သုံးသပ်တင်ပြထားတာကို တွေ့ရလို့ သိပ်ပြီး ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီမှာ အားနည်းချက် မရှိမဟုတ်ဘူး ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအားနည်းချက်လဲဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လူအများစုရဲ့ ဆန္ဒကို လိုက်နာရတယ် ပြီးတော့ အနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားပေးရပါတယ်။ ဒါပေယ့် တခါတလေမှာ အများစုက အနည်းစုဆန္ဒကို အသိအမှတ်မပြုပဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဘုရားလက်ထက်က ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးတဲ့ ဝေသာလီ နိုင်ငံမှာ အင်မတန် ချောမမောလှပတဲ့ ကချေသည် အမ္မပါလီ (စာလုံးပေါင်းမှားနိုင်) ကို လူငယ်တွေထဲက သူရယူလို ငါရယူလိုနဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ကျလို့ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ သေကြေမှုတွေ အဖြစ်များလာတဲ့အခါမှာ ဝေသာလီ ပါလီမန်က အမ္မပါလီကို ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ အမ္မပါလီဟာ ပြည့်တန်ဆာ ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ အများစုဆန္ဒနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကို ဘ၀ပျက်အောင် လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိုကရေစီဆိုတဲ့ လူအများစုဆန္ဒရဲ့ အားနည်းချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကြီးက မကောင်းတဲ့ သဘောထားတွေ ရှိနေရင် အနည်းစုကို လစ်လျှူရှုမှုက များလာပြီး အသိအမှတ်မပြုတော့ပဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြတာတွေ ခုခေတ်မှာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ် ဥပမာ လူအနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ထားတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်ရင် စည်းကမ်းရှိရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာ စည်းကမ်းမရှိရင် အများစုက လုပ်ချင်သလို လုပ်ပြီး အနည်းစုကို အုပ်စုလိုက် အနိုင်ကျင့်တာမျိုး ရှိနိုင်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အခြေအနေတွေ မဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီမိုကရေစီကို လူ့အခွင့်ရေးနဲ့ ဒွန်တွဲပြီး အသုံးပြုရတာ ဖြစ်တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေး ကြေညာစာတမ်းပါ အချက် ၃၀ ထဲမှာ လူတဦးချင်းစီ အတွက် (Civil and political rights) မတူကွဲပြားတဲ့ အုပ်စုမျိုးကွဲအုပ်စု တွေအတွက် (Economic, Social and cultural rights) တွေ ကို အာမခံချက်ဏ္ဍေသေးသိမ်နေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို နောက်ထပ် Protocol လို့ခေါ်တဲ့ သဘောတူညီချက် စာချုပ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီး၊ ကလေး၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား စသည်တို့အတွက် အာမခံချက်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးပြီး လူ့အခွင့်ရေးကိုလည်း လိုက်နာမယ်ဆိုရင် ဝေသာလီနိုင်ငံက အမ္မပါလီလို အဖြစ်မျိုး ဖြစ်စရာ အကြောင်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မဆိုလိ်ုချင်တာက ဒီမိုကရေစီဟာ ခုနက ပြောသလို အားနည်းချက်တွေ ရှိနိုင်ပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဒီမိုကရေစီထက် ကောင်းတဲ့စနစ်ကို ကမ္ဘာမှာ ဘယ်သူမှ မညွန်ပြနိုင်သေးပါဘူး။ အများစုကြောင့် အားလုံးသဘောတူညီမှုနဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး ဒုက္ခရောက်ရတယ် ဆိုရင်တောင်မှ ကိုလုပ်လို့ ကိုယ်ခံရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို အနည်းစု စစ်အုပ်စုကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဒုက္ခရောက်နေရတာနဲ့ စာရင်တော့ အများကြီး ဖြေသာပါနိုင်ဖွယ် ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိပြီးတဲ့အခါကျရင်လည်း တကယ်လို့ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာက ပိုကောင်းတယ် ထင်နေတဲ့ သဘောထားတွေကိုလည်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မတို့က သူတို့ရဲ့ အမြင်ကို အသိအမှတ်ပြု နားထောင်ပေးရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
( ကို ) အောင်ကိုကိုထိုက်ရေ.. မိတ်ဆွေကရော ဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အလေ့အထတွေကိုယဉ်ပါးနေပြီလား၊
ဟိုက်ရှားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး............။ ကော်မန်.တွေဖတ်ကြည့်မိသလောက်တော့ တကယ့်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘဝင်လေဟပ်နေတဲ့ကောင်တွေ ၊ ကောင်မတွေချည့်ပါဘဲလား ။ လုံးဝကို စိတ်ပျက်စရာကောင်တွေ ၊ ကောင်မတွေပါဘဲကွာ ။
ကြေးစည်သံကြားရင် ခွေးအူတာသဘာဝဘဲ ဘယ်ခွေးတွေအူဦးမလဲ စောင့်ရဦးမယ်
Although it doesn't directly concern with your post but I believe Democracy will not gain without havingafreedom first. I'd like to highlight what is happening in Iran demonstration for us to learn some lessons.
Technology can beagreat force behind revolution that tyranny hasadifficult time defending against
Students and demonstrators pass news and organize themselves by using twitter.
Her is YouTube video how an innocent girl shot death in the street.
More video on this site. http://mashable.com/2009/06/20/iran-youtube/
Here are some interesting discussion I came across on social media.
"Iranians are fighting to have their voices listened to. The guy they are supporting isn't all that great either, if you look into his past. A fight forafree Iran will play out another day. This fight is simply to be heard.
This is the key point! They are not free to speak, they are not free to say NO and for this reason they are not be heard!
If they were heard they would be free. I'd rather focus on what they want, rather than pushing American values, though. Freedom is gained step by step. Heck, even here in the United States we aren't completely free and aren't completely being listened to. Just try to getagay marriage, for instance."
.......သဘောပေါက်ချင်ချင်ဖြစ်နေသူများ အတွက် .........
""" ကိုယ့်ရဲ့ အရေးအသားဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းကို ရောက်ရဲ့လား ................."
...ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ ရရှိပြီးတဲ့အခါကျရင်လည်း တကယ်လို့ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာက ပိုကောင်းတယ် ထင်နေတဲ့ သဘောထားတွေကိုလည်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မတို့က သူတို့ရဲ့ အမြင်ကို အသိအမှတ်ပြု နားထောင်ပေးရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။...
Who are U..?
တကယ့်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘဝင်လေဟပ်နေတဲ့.... သူ ချည့်ပါဘဲလား ။ .....
I really appreciate this letter of Myanmar People Inside staying Myanmar....
He's so insightful and so humane..
Very different from this blog-owner & some people of away from myanmar, enjoying-staying-spoiling attitude at foreign country..
wouldn't surprise if the gentleman who wrote the letter brought up and studied in oversea bt now he isn't that so surprise to me. salute n appreciate on his knowledge n explanation, hey..guy pretty good. unfortunately it has no chance to share and educate the such kind of good view to our people as no media freedom under SPDC as long as holding the power.
Thanks for sharing his letter. We are so glad to learn about that , analyse of "Democracy" by one myanmar generation is very deep and sharp.
Hope that so many people can understand of "DEMOCRACY".
ဘ၀င်လေဟပ်နေတယ် ပြောတဲ့ အမည်မဖေါ်လိုသူအတွက်
ဘ၀င်လေဟပ်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်အချက်ကို ဆိုလိုလဲ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြန်ဆွေးနွေးပေးပါ။ ကျွန်မဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာ မထင်မှတ်ပဲ ပါသွားပြီး ရှင်ထောက်ပြလို့ သတိထားမိရင် ရှင့်ကို လေးစားသောသဘောနဲ့ ကျွန်မ အဲဒီစကားကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးမယ်။ လူတိုင်း ဘယ်သူမှ အမှားမကင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အများစုရဲ့ ဆန္ဒကို လိုက်နာခြင်းနှင့် အနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒကို လေးစားပေးခြင်း ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါပဲ ဖြစ်လို့ ရှင်ဘယ်လိုမှ ကန့်ကွက်လို့၊ ငြင်းလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ အများအတွက် အန္တရယ် ဖြစ်နေရင် အဲဒီ သူယုံကြည်မှုကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးလို့မရအောင် ဥပဒေတွေနဲ့ တားမြစ်လို့ပဲ ရတယ်။ သူယုံကြည်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ ကိုယ့်အတွက်မမှန်ပေမယ့် သူ့အတွက် သူမှန်တယ်ထင်လို့ ယုံကြည်နေတာကို ဘယ်သူမှ တားဆီးပိတ်ပင်လို့မရနိုင်ဘူး။ တနေ့ သူ့အလိုလို သိရှိနားလည်လာလို့ သူ့ဖါသာသူ စွန့်သွားမှပဲ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ကျွန်မကို ဘာသာခြား အစွန်းရောက်တွေက ဖမ်းပြီး ဘုရားရှိခိုးရင် သတ်မယ်လို့ တားဖြစ်ထားရင် သေမှာကြောက်လို့ ကျွန်မ ဘုရားမရှိခိုးပဲ နေရင်နေမယ်။ ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်နေတဲ့ သဒ္ဒါတရားကိုတော့ ဘယ်သူမှ တားလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ စစ်တပ်ကိုပဲ ယုံကြည်ယုံကြည် ဘာကိုပဲ ယုံကြည်ယုံကြည် လူတယောက်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အတင်အကြပ် တားဆီးပိတ်ပင်လို့ မရဘူး ဒါကြောင့်မို့ အသိအမှတ်ပြုပေးရပါတယ်။ အများကို မထိခိုက်ရင် ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ကို ပေးရတယ်။ ထိခိုက်ရင်တော့ ကျင့်သုံးလို့ မရအောင် ဥပဒေနဲ့ တားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်နေတာကို ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ အမည်မဖေါ်လိုသူက ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားကို လက်ခံတဲ့သူဆိုရင် ဒီအချက်ကို ဘာမှ ငြင်းချက်ထုတ်စရာ မရှိဘူးလို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမည်မဖေါ်လိုသူရေ ရှင်ဆွေးနွေးချင်ရင် ရှင့်အမြင်ကို ဘာကြောင့် ဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတာ ယဉ်ယဉ်ကျေကျေးလေး ဆွေးနွေးပါ။ ရှင့်အမြင်က ကျွန်မအမြင်နဲ့ ကွဲလွဲနေရင်တောင်မှ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ကွဲလွဲမှုကို လက်ခံခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်က ဘာမှမဆွေးနွေးပဲနဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေကို ခေါ်ဝေါ်တဲ့ ကောင်၊ ကောင်မတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောတာ မြန်မာလူမျိုး တယောက်အနေနဲ့ သိပ်ရိုင်းပါတယ်၊ မသုံးသင့်ဘူးလို့ ကျွန်မ ရှင့်ကို သတိပေးချင်တယ်။
YINT THWE NI said...
My comment for the first time to you and your friend who share his belief on democracy.
It's really great and suchadifferent.Please pass my respect and regard to his letter to us.
Practically we badly needs that kind of radicalism.
Would you please urge him to continue his sharings.
I believe their forces will change our country. I just think about myself, we need competence to beapart of them.
YINT THWE NI